Apple Silicon M1: ichaisa mamiriro muPC yepasi neARM? | Linux Vakapindwa muropa
IUS yarasikirwa nehutungamiriri hwayo mukugadzira chip, ikozvino mafayiri senge Samsung kana TSMC ari kumberi Nyika ye semiconductors iri kuchinja. AMD yanga ichienda yakasimba, neIntel ichienda panguva dzakaoma. Asi ... zvinogona kudaro kutanga kwekuguma kweX86 nguva uye kutanga kweARM?
Kunyangwe kuchine huwandu hwe software ye x86 uye kumagumo kunoratidzika kunge kuri kure, ichokwadi kuti kufambira mberi kwakawanda kwakaitwa maererano nemapakeji ayo akatogadzirirwa ARM. Uye chokwadi ndechekuti budiriro inogona kunge iine Apple nemagadzirirwo ayo ari kuzotariswa negirazi rinokudza nevamwe. Qualcomm yanga ichiedza kupinda muPC yepasi neiyo Snapdragon kwenguva yakati, uye havazi ivo voga, kune vakawanda vakaita saHuawei, nezvimwe. Uye kana izvo zvisina kukwana, RISC-V ichauyawo pane imwe nguva ... Qualcomm yaidawo kutora dudziro pane nhunzi kuti ikwanise kumhanyisa yakanyorwa x86 mabhinari paARM.
Apple Silicon haisi Arm IP yakakosha inoenderana neSoC (sevamwe vazhinji vanoshandisa Cortex cores) Aya ndiwo maitiro eApple anoshandiswa neISA ARM.
Iyo ISA ARM iri kuwedzera kuwedzera nemaowoni matsva, uye izvo zvakaonekwa muApple mharidzo zvakaunza kutarisira kukuru. Apple silicon yabereka muchero wayo wekutanga, iyo M1 ndiyo chip yezvikwata zvavo mushure mekurasa kubva kuIntel. Izvo zvinoonekwa zvinoita kunge zvinonakidza, uye mhedzisiro yekutanga mumabhenji, senge eGeekbench, inoita kunge inovimbisa ...
Geekbench hachisi chirevo chakanaka chekuenzanisa microprocessors yemhuri dzakasiyana, kunze kweizvozvo iwe unofanirwa kufunga nezve Apple yakakwenenzverwa kodhi (yakaunganidzwa rinenge gore rega rega), nepo mamwe eX86 anotora makore makumi maviri (nhaka). Ndiri kureva, iwe unofanirwa kutora zvibodzwa nekungwarira.
Iva sezvazvingaite, vamwe vangangoda kuyedza mhanza yavo neyavo ARM machipisi paPC mushure meiyi nhanho kubva kuApple. Ayo angangove mashoko akanaka, nekuti kwete chete kuti iwe unogona kuve neakasiyana chikuva, asi vagadziri vaizove nenzvimbo dzekushandira dzine simba kuti vakwanise kuumbiridza kubva kwavari natively (uye kanganwa nezve kuyambuka-kuunganidzwa kana kuyambuka-kuumbiridza), pamwe nekuyedza kodhi yako . Linus Torvalds akaratidzira chinguva chakapfuura kuti zvingave zvakanaka kuve nemaARM zvikwata zvinoshanda pa ...
Uye zvakare, akawanda x86 matekiniki uye zvikamu Ivo vakaunzwa kune mamwe mapuratifomu zvakare, izvo zvinoita kuti zvinhu zvive nyore. Semuenzaniso, patova nerutsigiro rweEFI muARM neRISC-V, kana ACPI inotsigirwa muARM, uye kunyange yakajairwa PC mamaboard fomu mafomu anogona kushandiswa pamapuratifomu, makadhi emifananidzo uye zvikamu zvakagadzirirwa x86 zvivakwa (mifananidzo yemakadhi, madhiraivha akaomarara , nezvimwewo). Ndokunge, ecosystem yatovepo yeX86 inogona kusimbiswa.
Zvakaguma nei? Zvakanaka, isu tichafanirwa kumirira, asi x86 inogona kunge isiri iyo chete inokwikwidza, yemhando yepamusoro mhuri munguva pfupi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Apple Silicon M1: ichaisa mamiriro muPC yepasi neARM?
Izvi ndizvo zvave zvichiitwa neChromrbook neARM, ichigadzika maitiro